प्रेमको अवैध गर्भबाट जन्मिएका जयगोविन्द साह जो सबै ढुकढुकी बने | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » प्रेमको अवैध गर्भबाट जन्मिएका जयगोविन्द साह जो सबै ढुकढुकी बने
प्रेमको अवैध गर्भबाट जन्मिएका जयगोविन्द साह जो सबै ढुकढुकी बने
SAHARA TIMES Monday, December 31, 20180No comments
(सिरहाका जयगोविन्द साह (जन्मः १९७६ मंसिर र मृत्युः २०४६ पुस २५ गते) किसान संघर्षका पर्याय थिए । त्यसका क्षेत्रका श्रमजीवी वर्गका ढुकढुकी थिए । उनी आफ्नो विचार र व्यवहारमा अविभाजित र अविचलित व्यक्ति थिए । जेलमा जन्मिएका, समाजिक उत्पीडनमा परेका, अभाव र गरिबीले थिचिएका, स्कूल र कलेजको मुख देख्न नपाएका तर आफ्नै प्रयत्नले भैसी गोठालेदेखि किसान कार्यकर्ता, नेता हुँदै राजनीतिक पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यको रुपमा समेत स्थापित हुन पुगेका जयगोविन्द साह एक संघर्षशील र बहुआयामिक व्यक्तित्व थिए । एक प्रेरणादायी र उदाहरणीय व्यक्ति थिए । यस्ता व्यक्तित्वको बारेमा साहित्यकार डी.आर. पोखरेलले ‘जयगोविन्द साहः एक संघर्षशील व्यक्तित्व’ नामको पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ । सोही पुस्तकबाट जयगोविन्द साहको जन्मको बारेमा लेखिएका केही रोचक प्रसंग यहाँ साभार गरिएको छ ।)
मिश्रि साह पच्चीस–तीस वर्षका युवक थिए । जगतकुमारीसँग प्रणय–प्रसगं चल्दा । सायद जगतकुमारी पनि त्यति नै वर्षकी हुनुपर्छ । किनभने उनले दुई अलग श्रीमान्हरुबाट अलग अलग दुई बच्चा हुर्काइसकेकी थिइन् र तर जगतकुमारी र मिश्री साहको प्रेम प्रसङ भने निर्विघ्न रहेन । जगतकुमारीको पुटुक्क बढेको पेट गाउँभरिको कुरा काट्ने मेसो बन्यो । हावा नलागी पात हल्लिदैन भने झै जगतकुमारीको बढेको पेटले मिश्री साहसँगको अवैध सम्ब्न्धलाई औल्यारहेको थियो ।
जगतकुमारीको दोस्रो पति हरिप्रसाद पोखरेलको मृत्यु भइसकेको र उनबाट पनि एउटा सन्तान भइसकेको स्थितिमा एउटी पहाडी मूलकी युवतीको मधेशका तल्लो जाति मानिने तेलीसँगको हिमचिमलाई समाजले सहज रुपमा के लिन्थ्यो र ? त्यसमाथि मिश्री साहकी जेठी श्रीमती छपरा (सारन जिल्ला, विहार भारत) मा थिइन् । तर दुनियाले जे भने पनि युवायुवतीको प्रणय जीवनलाई कुनै जातभात, उमेर, भाषा–भेष र कुनै राष्ट्रको सीमाले छेक्न सक्तैन भने जस्तै मिश्री साह र जगतकुमारीको प्रणय जीवनलाई यी कुनै कुराले पनि छेक्न सकेनन् तर प्रेमजीवन निर्विघ्न पनि बनेन ।
मिश्री साहका जातभाइहरुले नै अड्डामा उजुरी हाले । त्यतिखेरको ऐन कानुन पनि रुढिवादी परम्परामा खडा भएको थियो । दुई युवायुवती खुशीराजीसँग प्रेम सम्बन्धमा बाँधिन समेत ऐन काुनन बाधक थियो । साना जातको मिश्री साहले ठूला जातकी जगतकुमारी क्षेत्रिनीसँग विवाह गर्नु अपराध ठहरिन्थ्यो ।
यसै भएर त्यतिखेरको अदालतले यी दुवैलाई दण्ड गरी जेल सजाय तोक्यो । मिश्री साहले १२ वर्ष जेल सजाय बारबरको दुई हजार रुपियाँ विगो दण्ड तिरी जेलमुक्त भए तर जगतकुमारीले विगो तिर्न सकिनन् र ४ वर्ष जेल सजाय भोगिन् । मिश्री साहले पनि उनलाई सहयोग गर्न सकेनन् । यता दोस्रो पतिका परिवारले झन हेर्ने कुरा भएन । कतैबाट पनि सहयोग नपाएपछि जगतकुमारी एकदमै एक्लिइन्।
सबैतिरबाट एक्लिनु पर्दाको र चारवर्षे जेल सजाय भोग्नुपर्दाको मर्मान्त भावले एकातिर उनलाई भाव विह्वल बनाउँथ्यो भने अर्कोतर्फ मावन जीवनमा उमङग छाइदिने प्रेमको निशानी र भविष्यको सहारा आफ्नो पेटमा हुर्किरहेको सन्तानको मीठो अनुभूतिले उनलाई उद्धेलित हुन प्रेरित गरिरहन्थ्ययो । यी दुई विपरित धर्मी भावहरु एक गुजुल्टो भएर अनुहारभरि छरिँदा महान चित्र मोनालिसाकै अनुहारको जस्तो अनुपम भाव उनमा पनि पैदा भएको महसुस गर्थिन् ।
पक्कै पनि उनले आफ्नो विगतलाई पटक पटक फर्केर हेरिन् । कहिले पहिलो श्रीमान् र पहाडको मनोहर प्राकृतिक सम्झिहोलिन्, कहिले दोस्रो श्रीमानको मृत्युको मर्मान्त क्षण र मिश्री साहसितको रोमान्टिक क्षण एकैसाथ गुजुल्टिएर आए होलान् । कहिले माइतीतर्फको इज्जत, मान, मार्यादाको कुरा सम्झिइन् र कहिले सिरहाको एकान्तिक ठाउँमा रहेको जेल र त्यसभित्रको महिला कैदीहरुको अँधेरो कोठा र त्यसमध्येको आफ्नो विवश जीवनको बोध गरिन् होला ।
तर उनलाई आफ्नो बढ्दो पेट र आसन्न सुत्केरी अवस्थाको चिन्ताले नव दुल्हनलाई जस्तो छोएन । किनभने उनलाई सुत्केरी जीवनको राम्रै अनुभव भइसकेको थियो । बरु सुत्केरी हुँदा आवश्यक कुराहरु– खानपिन, सरसफाई, तेल मालिस, बच्चाको नाल–साल काट्ने औजारदेखि लत्ताकपडाको जोहो गरिन् होला । जेल परेको चौथो महिना उनका लागि केही कष्टकर पनि बन्यो ।
पेटभित्रको शिशु बाहिरी संसार आउने क्रममा थियो । प्रतीक्षाको घडी पर्खिन गाह्रो मात्र हो, नजिक आएपछि त्यो त्यति पट्यार लाग्दो बन्दैन, झिलिक्क एकछिन जस्तो बन्छ । जगतकुमारीलाई सुत्केरी व्याथाले च्याप्यो । मंसिर १९७६ को त्यो दिन उनलाई शारीरिक कष्टले भन्दा पनि मनको खुशीले उमङ्गित बनायो । जेलका केही कैदी महिलाहरुले सालनाल काट्न र बच्चालाई सरसफाई, पुछपाछ गरी आमाको छेउमा सुताई दिए । जगतकुमारीले अलिकति कोल्टो फर्केर नवजात शीशुलाई हेरिन् र मुसुक्क मुस्कुराइन् ।
उनलाई शीशुको नाक आफ्नै जस्तो केही फुकेको लाग्यो ।
यस शीशुको न्वारन त हुन सकेन तर जेलमा जन्मिएकाले सबैले जेलिया भन्न लागे र पछि जेलिया भन्दाभन्दै ‘जय’ भएर वैश्यहरुका गुरु ‘गोविन्द’ साथै भगवान भनिएका ‘कृष्ण’ पनि जेलमै जन्मिएकाले र तेली (वैश्य) का सन्तान भएकाले यस नवजात शीशुको नाम ‘जहेल गोविन्द’ हुँदै ‘जयगोविन्द’ राखियो । न्वारविना नै राखिएको यस नामका पछि ‘तेली’ थर थपियो र ‘जयगोविन्द तेली’ भन्ने नामकरण गरियो । यही शिशु नै पछि आफ्नै पराक्रमले वामपन्थी व्यक्तित्वको रुपमा समाजमा स्थापित भयो जयगोविन्द साहका नामले ।
जेल परेको चार महिनासम्म जगतकुमारीले जयगोविन्दलाई पेटमा हुर्काइन् । यसको अर्थ हो उनी जेल पुर्न अघि गर्भिणी भएकी थिइन् । जयगोविन्द साह मंसिरमा जन्भिएका थिए । मंसिरको गते बार खुलेको त छैन तर उनको देहावसान पुस २५ गते मंगलवार भएकाले उनको जन्म पनि मंसिरको तेस्रो वा चौथो हप्ताको मंगलवार भएको हुनसक्छ । जन्म गते बार र तिथि खुलाउने अर्को उपाय जेलमा गएर वि.सं. १९७६ सालको ढड्डा हेर्नु हो । यसले जन्ममिति, जेल परेको तिथि मिति र जेलबाट छुटेको तिथिमिति खुल्न सक्थ्यो तर जेल गएर बुझ्दा ढड्डा फेला पर्न सकेन ।
त्यसकारण जयगोविन्दको जन्म तिथिमिति र जेलबाट छुट्दाको तिथिमितको एउटा सम्भाव्य अनुमान गरिएको हो । जगतकुमारी र मिश्री साह १९७६ को साउनको तेस्रो हप्तातिर जेल परेका थिए । यसैले चार महिनापछि जयगोविन्द जन्मिएका थिए । जन्मेको ३ वर्ष ८ महिनासम्म जयगोविन्दले विनाकसुर जेल जीवन विताउनु पर्यो । आमाको कैदमा छोरा पनि कैदी बने । ठेकिएको ४ वर्षे कैद भुक्तान गरेर वि.सं. १९८० साउन २५ गते मात्र आमाछोरा जेलबाट बाहिर निस्किए ।
जन्म भएर ४ वर्षसम्म जयगोविन्द साह कसरी हुर्किए ? कहिलेदेखि घस्रेर हिड्न थाले ? कहिलेदेखि उनको बोली फुट्यो ? शिशु अवस्थामा उनी कति रुने गर्थे ? जगतकुमारीले कुन उपायले बच्चा हुर्काइन् ? जेलमा जन्मिएको बच्चाको खान्की खुराक जेलबाट प्राप्त हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? जेलमा रहुन्जेल आमाछोरा कतिचोटी विमारी परे ? कसरी औषधी उपचार भयो ? यी सारा कुराहरुको प्रसंङगमा यसै हो भनेर भन्न सकिने कुनै उपाय रहेको छैन । सबुत प्रमाणको अभावमा यी कुराहरु बारे केही भन्न सकिने स्थिति त छैन तर जगतकुमारीले जसरी जयगोविन्दलाई हुर्काइन्, त्यो चानचुने कुरो थिएन । यसबाट जगत कुमारीको कर्मठता संघर्षशिलता र धैर्यताको परिचय पाइन्छ ।
उनी कतिसम्म कर्मठ र क्रियाशिल थिइन् भने जेलको सामान्य खर्चले बच्चा हुर्काउन मुस्किल भए पनि उनले जेलभित्रै पान सुपारीको पसल खोली राम्रो आयस्ता गरेकी थिइन् । त्यसैबाट हँसुली जोडेकी थिइन् भन्नेसम्मको भनाई पाइन्छ । जेहोस् उनी हिम्मतिली नारी देखिन्छिन् । उनको यही कर्मठता, साहस, हिम्मत र क्रियाशिलताको प्रभाव शिशु जयगोविन्दमा पनि पर्न गएको सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
जेलबाट निस्किएर कहाँ जाने भन्ने कुरामा जगतकुमारीमा कुनै द्धिविधा थिएन । जेलबाहिर जाने दिन आउनुअघि नै उनले बडहारा मिर्चैयाकी एकदमै मिल्ने आफ्नी संगिनीमार्फत बस्ने ठाउँको अस्थायी प्रबन्ध गरिसकेकी थिइन् । अर्कोतिर मिश्री साहले पनि कहिलेकाँही गाउँलेहरुको आँखा छलेर आमाछोरालाई भेट्ने गरेका थिए ।
अप्रत्यक्ष रुपमा मिश्री साहको पनि सहयोग जगतकुमारीलाई प्राप्त थियो । त्यसो भएकाले जेलको कैद भुक्तान भएर जेलमुक्त भएपछि टुकटुक हिँड्ने जयगोविन्दलाई अघि लगाएर जगतकुमारी सरासर बडहारा मिर्चैया आइन् र आफ्नी मिल्दी सँगिनीले व्यवस्था गरिदिएको बासस्थान (एउटा मुसहरको खोली कटेरा) मा बस्न थालिन् ।
जेलियालाई हेर्ने मुसहर टोल नै खनियो । सुखी लगायत केही गरिब परिवारका महिला र केटाकेटी पनि हेर्न आए तर तेली परिवारका हुने खानेहरु भने कोही पनि आएनन् । मिश्री साह पनि आएनन् । आएकामध्ये केही बुढी आमाहरुले जयगोविन्दलाई हेरेर गहभरि आँसु पारे ।
मनमनै सोचे होलिन विचरो बाउआमा, हजुरआमा लगायत घरपरिवारको माया हुर्किनु पर्ने बच्चो, के गर्ने जेलको चिसो सिँढीमा हुर्कियो, बाउको माया पनि पाएन । उसकै समाजका मानिसले यसरी उपेक्षा गरिरहेका छन् भन्दै जयगोविन्दलाई टिठ्याए । कसै कसैले जगतकुमारीप्रति पनि सहानुभूतिका आँखा फाले तर जतिले जयगोविन्दलाई हेरे सबैले एक सोझो, गम्भीर र धेरै कुरा जान्न खोज्ने एउटा होनहार बालकको रुपमा पाए ।
जगतकुमारी जेलमा नै पकाउने भाँडाकुँडा जोडेकी थिइन् ।
एकसरो ओढ्ने ओछेयाउने पनि व्यवस्था गरेकी थिइन् । जेलबाट आउँदा केही रुपैयाँ पनि कमाएर ल्याएकी थिइन् र एकजोर हुँसुली समेत जोडेकी थिइन् ।
घरपरिवार चलाउन व्यवहारिक ज्ञान भएकी र आफ्ना दुख दर्दको कुनै प्रवाह नगर्ने, कसैसित गुनासो नगर्ने, सबैसँग हाँसिखुशी, मिजासिलो पाराले कुरा गर्ने अत्यन्त क्रियाशिल र चुस्त प्रकारको व्यक्तित्वकी धनी भएकाले उनले त्यही कटेरालाई आफ्नो सुन्दर बसेर बनाइन् तर उनको जीवन कष्टपूर्ण थियो । हुर्किरहेको छोरो र आफ्नो प्राण धान्ने क्रमममा उनले साथीसँगिनीहरुको काममा अर्मपर्म मात्र होइन ज्यालादरी काममा समेत खटिइन् । खेत खलियानको काममा पनि खटिइन् । विस्तारै उनले पान सुपारी र विडीको पसल खोलिन् र पैसाको अभावलाई केही मात्रामा हटाइन् ।
आमाको असीम स्नेहमा हुर्किरहेका र जेलको एकनासे वातावरणमा हुर्किएका जयगोविन्दलाई यो बाहिरी संसार अच्चमको लाग्ने गथ्र्यो । यहाँको वातवारणमा हुर्किएका भिन्न भएकाले र यहाँ थरीथरीका मानिस, सबैको आआफ्ना बसेरा, आआफ्ना बचेरा, आआफ्ना लहनतहन, आआफ्नो सुरसार देखेर जयगोविन्द तीन छक्क परेका थिए । उनको बाल मनले यसको भेद छुट्याउन सक्दैन्थ्यो । उनको मनभरि कति हो कति प्रश्नहरु खडा हुन्थे कहिले काँही आमालाई यी प्रश्नहरु सोध्ने गर्थै । आमाले पनि जानेसम्मको बताउने गर्थिन् । तर कतिपय कुरा आमाको पनि बुझाइभन्द बाहिरका हुन्थे ।
जयगोविन्दको बालमनमा नाना तर्कहरु खेल्थे । उनलाई सबैभन्दा बिझाउने कुरा साथीहरुको ओइ जेलिया भन्ने हुन्थ्यो । साथीहरुले तेरो बाउ को हो ? पनि भन्थे । साथीहरुसँग खेल्दा पनि कसैले पनि आफूप्रति ध्यान नदिएको र ससाना कुरा गर्न र भन्न नजान्दा पनि जिस्काउने र हेलाहोचो गरी गाली गर्ने गरेको देखेर जयगोविन्द जिल्लिन्थे । के गर्दा साथीहरुको ध्यान आफूप्रति जाला र के गर्दा आफू पनि अरु समान भइएला भन्ने कुराले उनी पिरोलिन्थे यही पिरलो उनको जिज्ञासाको रुपमा प्रकट हुने गथ्र्यो ।
साथीहरुसँग मिलेर दोकान गरी खेल्ने गर्दा एक दिन उनले आफ्नै छुट्टै पसल बनाए । सधै ख्यालख्यालको समान राखेर खेल्ने गरेकोमा यसपटक उनले घरबाट अलिकति सख्खर ल्याए र ख्यालख्यालको दुकानमा सँच्चैको सख्खर राखे र सबै केटाकेटीको ध्यान आफूतिर खिचे ।
त्यो दिन उनको पसल मात्र चल्यो अरु केछाकोटीको पसल चलेन । धेरै जसको केटाकेटी उनको पसलमा आए र साँच्चैको सख्खर ख्यालख्यालको पैसामा किनेर खाए । यसरी पहिलो चोटी जयगोविन्दले आफ्नो बुद्धि लगाएर सबैको ध्यान खिचे । त्यो कुरो एककान दुईकान मैदान हुँदै बडहरा मिचैयाभरि फैििलयो । जगतकुमारीको कानमा पनि यो कुरा पर्यो । जगतकुमारीले छोराको यो बठ्याई देखेर दंग परिन् । भावविभोर बनिन् ।
आँखाबाट आँश्रुका धारा पनि बहाइन् । मेलाबाट फर्किएर कटेरामा आएपछि जयगोविन्दलाई उचालेर सयौचोटी म्वाई खाइन् । खुशीले अर्धपागल जस्तै भएर सयौचोटी बाहिरभित्र गरिन् ।
छोरालाई के चाहि मिठो कुरा खान दिने होला भनेर छटपटिइन् । जेनतेन आफूले दुई गास टिपिन् र ओच्छयानमा पल्टिइन् । आफ्नो विगत जीवनको एकएक चित्रहरु सिनेमामा रिलजस्तो बनेर आए । पटक पटक वितग चियाइन, भविष्यको कल्पना गरिन् र वर्तमानको सुखद कल्पनामा रङमङिदै आँखाभरि जयगोविन्द नै जयगोविन्द चलचित्र बनेर आएको देखिन् । रातभरि ओल्टोकोल्टो गर्दै छर्लङ्गै रात काटिन् । उता जयगोविन्द भने विहानसम्म भुसुभुसु निदाइरहेका थिए ।
भोलीपल्टदेखि जयगोविन्द साथीहरुका केन्द्र बन्न थाले । हिज्जोसम्म नखेलाउने साथीहरुले पनि आज खेलाउने र सँगै खेल्ने निम्ता दिन थाले । गाउँका बुढाबुढीहरुले पनि जयगोविन्दको बुद्धि प्रशंसा गर्न थालेका थिए । मिश्री साह पनि छोरालाई भेट्ने निहुँमा आउन थालेका थिए ।
यता आमा छोराको अािर्थक अवस्था निकै जर्जर थियो । गाउँहरुले पीठ पछाडि कुरा काट्न थालिसकेका थिए । मिश्री साहको निष्ठुरीपना र स्वार्थीपनाको आलोचना हुन लागेको थियो । ‘श्रीमती चाहिनेले खान लाउन पनि दिनुपर्छ, अन्याय गर्न पाइन्न’ भन्ने भावना फैलिन लागेको थियो । यो काुरा कानकानै मिश्री साहको बाबा अनमोल साहको कानमा पुगेको हुनुपर्छ र व्यापारिक मानिसमा बदनामीको डर हुन्छ ।
धेरै बदनाम भएपछि व्यापार फैलिन सक्दैन भन्ने बुझेको तेली परिवारले आखिर जगतकुमारीलाई केही जग्गा दिएर एउटा कटेरो (सानो घर) बनाएर राखि दिने निर्णय गरेयो । एउटा सानो कटेरोमा आमाछोरा बस्न थाले । सँगै एउटा भैसीको थोरे पनि मिश्री साहले जगतकुमारीको गोठमा बाँधिदिए । चन्द्रशम्सेर सतीप्रथा उन्मुलन गर्ने कानुन ल्याएका थिए ।
यसै गरी दासप्रथा उन्मुलन गरेका थिए । यसको पनि केही डर तेली परिवारलाई परेको हुनुपर्छ । अर्कोतिर गाउँगाउँमा कबीरपन्थीहरु कबीरका दोहा गाउँदै निराकार ईश्वरत्वको प्रचार गर्थे । सांसरिक दुखसुखलाई तृण बराबर ठान्थे । गाउँमा जातपात, छोइछिट्टो, धनी गरिबको भेद नरहोस् भन्ने आशयका दोहारु गाउने गर्थे ।
घरमा भैसी आएपछि जयगोविन्द विहान बेलुका अरु साथीहरुसँगै भैसी चराउन जान थालेका थिए । उनी त्यही थोरेमाथि घोडा चढेझै र विहान घाम नछिप्पिउन्जेल र बेलुका अँध्यारो नहुँन्जेल भैंसी चराउने गर्थे । भैसी चराउने क्रममा साथी भाइहरुसँग खेल्ने, रमाउने गर्थे । विस्तारै जयगोविन्द साह भजन किर्तन र बाजा गाजा बजाउन पनि थाले । एउटा कुटीमा गएर साधुसँग कबीरका श्लोकहरु पनि सिक्न थाले ।
ख्यालख्यालको पसलमा साँच्चैको सख्खर राखेर सारा बालसखाहरुलाई आफूतिर तान्ने बुद्धि लगाएका जयगोविन्द भजन मण्डलीको कीर्तन सुनेर कसरी गाउन र बजाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा पैदा भयो र बाजागाजा बनाउन अनि दोहाहरु गाउन सिके । अरुले हेपेकाले किन हेप्छन् भन्ने प्रश्न उठेकाले शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुन पहलमानी सिके ।
रामलिला टोलीको गायन, नृत्य र अभिनय देखेर यस्तो आफूले पनि जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना उठ्यो र तुलसीकृत रामायण पढी श्लोकहरु कण्ठ पारे । यसैगरि अरुले अक्षर पढेको देखी त्यसरी पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न मनमा पैदा भयो र फस्टबुक पढी पार्टीमा लेख्न सिकी त्यो क्षमता आर्जन गरे । गाउँमा अन्याय भएको, जातभात र छुवाछुत जस्ता भेदभाव भएको महसुस गरी त्यसबाट कासरी छुटकारा पाइएला भन्ने भावना जागृत भएको र अनेक संगठन मार्फत त्यसलाई हटाउन कठिन संघर्षमा होमिए र ग्रामिण जनसघर्षलाई मुलमन्त्र बनाए ।
नेताहरुको जनता ढाँट्ने, छलछाम गर्ने र जनतालाई गुमराहमा राख्ने अनेक दाउपेच बुझी त्यसको विरुद्ध पनि संघर्ष गर्दै रहे । यसरी जयगोविन्दको मनमा जुन प्रश्नहरु उठे त्यसको उत्तर खोजीमा उनले आफ्नो जीवन तत्तत् उत्तर प्राप्तिको निम्ति कठिन साधनामा लगाए ।